Waa maxay sababta ay tahay inaad uga fiirsato Maalgelinta Guryaha Fog ee fog? -
Bogga ugu weyn Waa maxay sababta ay tahay inaad uga fiirsato Maalgelinta Guryaha Fog ee fog?
isha sawirka: marketwatch
Haddi ujeedadaadu tahay inaad lacag badan samayso oo aad hanti hesho, inaad maal gashid hanti ma guurto ah oo kobcaysa waa dariiq aad mari karto. Maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog waa qayb ka mid ah maalgashiga hantida maguurtada ah taas oo ra'yigeyga shakhsi ahaaneed uu leeyahay faa'iidooyin badan oo ku xiran.
Si kastaba ha ahaatee, maalgashiga hantida maguurtada ah ee fogfog waxay leedahay dhibaatooyin laga yaabo inaadan la kulmin haddii aad maalgashanayso hanti ku dhow agagaarkaaga.
Maqaalka hoose, waxaan isku dayi doonaa oo iftiimin doonaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog iyo sababta ay tahay inaad uga qayb qaadato haddii aad awooddo.
Waa maxay maalgashiga hantida maguurtada ee fogfog?
Marka hore, aynu si fiican u eegno waxa dhabta ah ee maalgashiga hantida maguurtada ah ee fog-fog. Sida magacaba ka muuqata, maalgalinta hantida maguurtada ah ee masaafada dheer asal ahaan waa marka maalgaliyuhu doorto inuu iibsado hanti maalgashi oo ku taal meel aan u dhowayn ama aan ku jirin hoygooda.
Hantida la maalgashanayo badanaa waxay ku taal gobol ama magaalo kale. Si kastaba ha ahaatee, maalgashi kasta oo ka dhaca suuqa hantida maguurtada ah ee kala duwan waxaa loo tixgelin karaa fogaan dheer.
Qof kastaa runtii wuu maalgashan karaa hantida maguurtada ah ee fogfog, laakiin inta badan wakhtiyada qaar waxa ku dhaqma maalgashadayaasha suuqyada qiimaha sare leh sida San Francisco ama New York City kuwaas oo ku nool meelahan iyo sida maalgashiga suuqyadan ayaa laga yaabaa inaanay u muuqan mid faa'iido leh taas oo keenta in lagu riixo in la maalgashado magaalooyinka ama gobolada kale.
Akhri: Waa maxay Maalgelinta Mawduuca? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Waa maxay sababta aad u tixgeliso maalgelinta hantida maguurtada ee masaafo dheer?
Maalgelinta guryaha kala bar waddan kaa fog waxay u ekaan kartaa wax yaab leh laakiin inta badan, iyadoo ku xiran goobtaada, waxay u adeegi kartaa ilo dhaqaale oo faa'iido leh haddii si sax ah loo sameeyo.
Hoos waxaan ku iftiimiyay dhowr sababood oo aad u go'aansan karto inaad ka qaybgasho oo aad maal gashato hantida ma guurtada ah ee fog.
1. Kala-duwan Maalgelintaada
Kala duwanaanshuhu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah maalgashiga kaas oo kaa caawinaya dhimista khatartaada. Maalgelinta guryaha ka baxsan deegaankaaga waxay yaraynaysaa khataraha la xidhiidha maalgashiga.
Haddii aad u malaynayso in masiibo dabiici ahi ay ku dhufato magaaladaada, waxaad rabi lahayd jaakad badbaado ah oo aanay saamayn doonin masiibada degdega ah ee deegaankaaga, iyo maalgashiga hantida maguurtada ah ee fog-fog ayaa ku siin kara taas.
Tani waxay ku gelinaysaa xaalad la mid ah maalgelinta kaydyo kala duwan.
2. Hel Maanta Hanti Ma-guurto ah
Iyada oo la kaashanayo intarneedka iyo goobaha guryaha ee badan ee khadka tooska ah, aad ayey u fududahay in la helo guryaha kala bar adduunka oo dhan. Iyada oo la kaashanayo dalxiisyada casriga ah, looma baahna inaad u safarto dhammaan jidka gurigaaga shaqsi ahaan.
Waxa kale oo aad ku heli kartaa guryo ku jira xaalado aad u fiican iyadoo kiraystayaasha ay hore u joogeen. Waxa kale oo aad la wareegi kartaa kiraynta guriga oo aad iibsan kartaa guriga.
Haddii aad qandaraas ku qaadato maareeyayaasha hantida saxda ah, waxaa lagu maamuli karaa guryahaaga oo aad si toos ah faa'iido uga heli kartaa raaxada gurigaaga.
Akhri: Waa maxay Maalgelinta Qiimaha Tirada Badan? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
3. Si fudud u go'aami kirada suuqa cadaalada ah
Iyada oo la adeegsanayo tignoolajiyada, waxaad ku dhejin kartaa qiimo suuq cadaalad ah guryahaaga. Waxaad ka raadin kartaa qiimaha kirada aagga gurigaagu ku yaal oo waxaad ka heli kartaa macluumaadka qiimaha caadiga ah ee agagaarka.
Waxa kale oo aad hubin kartaa faahfaahinta sida heerka dambiyada aagga, qiimaynta dugsiga, iyo hoyga goobta shaqada.
4. Samee Isbarbardhigga Iibkaaga
Mararka qaarkood, waxaad u baahan doontaa inaad ururiso macluumaadka ku saabsan hantidaada si ay kaaga caawiso inaad go'aanno gaadho.
Waxaa jira dhowr goobood oo online ah, oo ay ku jiraan RoofStock kaas oo kaa caawinaya inaad go'aamiso qiimaha badeecadaha aagga.
5. Fursado badan
Maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog, waxaad ku nasan kartaa in maalgashigaaga hantida maguurtada ah uu ku jiro gacmaha saxda ah.
Haddii aad maal-gashato aaggaaga, waxay u badan tahay in aad adigu iskaa wax u qabsato hantida ma-guurtada ah taas oo kugu kalifaysa inaad wakhtigaaga iyo agabkaaga ku bixiso si aad u maamusho hantida.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad maalgeliso masaafo dheer, waxaad u baahan doontaa inaad kireysato shirkad maareyn hantida si ay kuu qabato shaqada.
Tani waxay ku siinaysaa xoriyada aad ku qabato hawlo kale oo aad hesho rajo wanaagsan oo aad ku dari karto faylalkaaga
Sababaha sababta masaafada dheer aysan khatar u ahayn sida aad u malaynayso
Waxaa laga yaabaa inaad ka digtoonaato sida xorta ah ee aad u maarayn karto hantidaada haddii ay aad kaaga fog yihiin laakiin run ahaantii uma baahnid inaad wax badan ka dhibto taas.
Waxaa jira siyaalo gaar ah oo aad si toos ah ula socon karto hantidaada adigoon u baahnayn inaad qof ahaan meeshaas joogto. Kuwaas oo kala ah;
Akhri: 20 Blogyada Maalgashiga Ugu Fiican Sanadka 2021
Bilawga internetka, aduunka sida aynu ognahay asal ahaan waa tuulo yar oo caalami ah kaas oo aan ku wada xiriiri karno sidoo kale aan hubin karno maalgelinteena adigoo gujinaya badhanka iyada oo aan dhib lahayn.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa faahfaahin iyo macluumaad badan oo ku saabsan internetka si ay kaaga caawiyaan inaad go'aansato maalgashiga ugu habboon ee ay tahay inaad maalgeliso iyo sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo hantida hadda jirta.
Internetku wuxuu si guul leh u beddelay habka maalgashiga fogaanta fog loo eego maalgashadayaasha guud ahaan.
2. Waxaad si sahlan ku heli kartaa Qiyaasta Kirada
Shabakado internetka ah ayaa hadda diyaar ah halkaas oo aad ka samayn karto raadinta kirada hordhaca ah adiga oo si fudud u gelinaya faahfaahin gaar ah oo ku saabsan gurigaaga oo aad fikrad fiican ka heshid waxa laga filayo xagga kireysiga guriga.
Waxa kale oo aad arki kartaa qiimaha kirada mulkiilayaasha kale ee guryaha la mid ah kuwaaga oo ay la mid yihiin hantidaada.
3. Waxaad Xaqiijin kartaa Xaaladda Guriga
Tignoolajiyada casriga ah ee maanta iyo horumarinta taleefannada casriga ah, uma baahnid inaad mayl u safarto si aad u hubiso hantidaada.
Waxaad yeelan kartaa wakiil, jumlale, maareeyaha hantida, iyo qandaraasle kuwaas oo dhamaantood kuu soo diraya fiidiyowyada gudaha iyo bannaanka guryaha ee laga yaabo inaad xiisaynayso.
4. Waxaad ka ogaan kartaa wakiilka aad isticmaalayso
Waxa kale oo aad si fudud u ogaan kartaa faahfaahinta ku saabsan wakiilka gacanta ku haya gurigaaga adigoo gujinaya badhanka.
Ka raadi wakiillada guryaha ee goobta lagu magacaabo Zillow iyo sidoo kale hel hantiilayaal wax soo saar sare leh.
Zillow waxa kale oo uu daaha ka qaadi doonaa macluumaadka sida inta heshiis ee ay sameeyeen 12-kii bilood ee la soo dhaafay taasna waxay kaa caawinaysaa inaad u doorato wakiilka sare ee saxda ah.
5. Waxaad arki kartaa sawiro adigoon u baahnayn inaad weydiiso
Iyada oo u fudud sida raadinta internetka, waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay guriga. Waxaad sidoo kale arki kartaa guriga adigoon ka bixin.
Qaar ka mid ah boggaga internetka ee liiska ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah sawirada gudaha iyo sidoo kale deegaanka guryaha si aadan uga welwelin inaad ka baxdo guriga oo aad uga tagto aaggaaga raaxada oo dhan si aad u aragto guryaha laga yaabo ama laga yaabo inaadan arkin. helid.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad taxaddar muujisaa sababta oo ah muuqaalku waxay u muuqdaan inay khiyaameeyaan gaar ahaan marka sawiro loo qaaday ujeeddada ugu weyn ee xayeysiinta.
Marar badan, laguma talinayo in loo isticmaalo sawirada online ka ah tixraaca tixraaca markaad tixgelinayso guri.
Akhri: Buugaagta ugu Fiican ee Laga Akhriyo Maalgelinta 2021
7. Waxaad ka heli kartaa Comps Naftaada Online
Realtor, Trulia, iyo Zillow dhamaantood waa albaabada liiska kuu oggolaanaya inaad raadiso iibkii hore oo aad fikrad wanaagsan ka hesho qiimaha guryaha ee aagga aad raadinayso. ku lug leh oo asal ahaan kaa caawinaya inaad go'aamiso haddii aaggu kuugu habboon yahay adiga.
Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho macluumaad badan oo sax ah oo ku saabsan qiimaha iyo macluumaadka guud, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raadiso wakiil aqoon u leh degaanka aad rabto inaad maalgashato oo leh rikoor wanaagsan oo soo saarista maalgelinta hantida maguurtada ah ee qiimaha leh.
Bogga internetka ee internetka marna ma geli karaan booska taabashada bini'aadamka ee hal-ka-mid ah taas oo inta badan looga baahan yahay waqtiyada ganacsiga guryaha gaar ahaan marka ay tahay maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog.
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee fog-fog asal ahaan waa marka maal-galiyuhu doorto inuu iibsado hanti maal-gashi oo ku taal meel aan u dhowayn ama aan ku jirin hoygooda.
Waa maxay maalgashiga hantida ma-guurtada ah?
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah waxay ku lug leedahay iibsashada, lahaanshaha, maamulka, kiraynta, iyo iibinta hantida ma-guurtada ah ee faa'iidada.
Sideen ku heli karaa fursadaha maalgashi ee hantida maguurtada ee fogfog?
Waxaad isticmaali kartaa liiska liistada internetka ee la heli karo ama waxaad heli kartaa wakiilka hantida maguurtada ah kaas oo kaa caawin kara raadinta maalgelinta saxda ah ee adiga kugu habboon.
Waxaa jira dhowr sababood oo ay tahay inaad tixgeliso maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog kuwaas oo ah:
Kala Bixinta Maalgashigaaga
Maanta Hel Hantida Maguurtada ah
Si Fudud U Go'aami Ijaarka Suuqa Cadaalada
Samee Isbarbardhigga Iibkaaga
Lahaanshaha guryaha hantida maguurtada ah ee ka fog meesha aan deganahay suurtagal ma tahay?
Suurtagal ma aha oo kaliya laakiin aad u fudud oo aan walwal lahayn, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad naftaada ka hesho bogga liiska saxda ah ama wakiil wanaagsan oo aad si fiican ugu socoto inaad hantido hanti aad u fog.
Maalgelinta hantida maguurtada ah ee fog ma aha fikrad xun.
Horumarka iyo horumarinta tignoolajiyada asal ahaan ma jirto wax laga cabsado maadaama ay la xiriirto maal-gelinta hantida maguurtada ah iyada oo aan loo eegin inta aad ka fog tahay maalgashigaaga, waxaad mar walba ku heli kartaa taleefankaaga casriga ah.
In la arko baahiyaha iyo maaraynta maalgelintaada weligood may fududayn xilligan cusub.
Buugaagta Maalgashiga Suuqa Suuqa ugu Wanaagsan 15 ee ugu Sareeya
20 Blogyada Maalgashiga Ugu Fiican Sanadka 2021
Waa Maxay Maalgelinta Micro Oo Sideen U Bilaabaa?
11-ka Kaararka amaahda ee ugu wanaagsan ee aan la hubin
Bangiyada Maalgashiga ee ugu Fiican Australia 2022 | Heerarka, Debaajiga Ugu Yar
In kasta oo Australiya aysan waligeed ahayn tan ugu wanaagsan bangiyada maalgashiga muddooyinkii u dambeeyay, bangiyadani ma joojin…
Wax yar ka hor inta aan laga hadlin saamiyada ka hooseeya 10 senti sanadka oo dhan, waa muhiim in waxyaabaha qaar la sameeyo…
Halbeegga lagu cabiro hantida mustaqbalka ee ninku wuxuu awood u leeyahay inuu maareeyo maaliyaddiisa…
Waa maxay Maalgelinta Qiimaha Tirada Badan? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Markaad rabto inaad maalgashi ku samayso shirkad, warshado, ama urur, falanqaynta xogta aad hesho…
20 Software Tracking Investment ugu Fiican 2022 | Tusaha Khubarada
Waan ogahay walaaca aan ku dhaafo isku dayga inaan xasuusto furaha sirta ah ee aaladaha kala duwan waxaan leeyahay akoon…
Lacagtu ma tahay Maalgelin Wanaagsan? 13 Sir oo ay tahay inaad ka ogaato
Kasbashada bishiiba, iyo sannadkiiba waxa laga yaabaa inaanay ku siin xorriyadda maaliyadeed ee aad rabto - maalgashi taxane ah ayaa sameeya.…